Shan arrimood oo ku saabsan Robert Mugabe - BBC News Somali
Robert Mugabe wuxuu ku dhin isbitaal ku yaalla Singapore halkaas oo looga daweynayay xannuuno, sida qoyskiisa ay xaqiijiyeen. Tan iyo bishii April ayuu halkaas ku sugnaa Mugabe.
Zimbabwe waxay ku jirtay dhaqaale xumo tobankii sano ee la soo dhaafay. Heerarka shaqa la'aanta dalka way kala duwan yihiin, balse shirkadda ugu sareysa ganacsiga dalka waxay sheegtay in ay gaareyso 90 boqolkiiba ka dib qiimeyn ay sameysay.
Mugabe oo xilka laga tuuray isagoo 93-jir ah jirka ah waxaa ku jah-wareeray kuwa muddada dheer dhalleeceynayay. Mararka qaar wuxuu kuwaasi ku tilmaami jiray "sawirro" dibad joogayaal ah.
Zimbabwe oo ka wardhowraysa mustaqbalka Mugabe
Balse isaga iyo taageerayaashiisa "waxay adeegsadeen qalalaase, si ay awoodda ugu sii fadhiyaan", wuxuuna isticmaalay dad ka shaqeeya dowladda si uu u xoojiyo xisbigiisa iyo naftiisa.
Wuxuu markastaa sheegi jiray in uu xilka wareejinayo marka "kacaankiisa" uu dhammaado, balse wuxuu doonayay in uu xusho qofka uu xilka ku wareejin lahaa, arrintaas oo loo maleynayo in ay sabab u tahay dhibaatada siyaasadeed ee uu wajahay, iyadoo xaaladdiisa caafimaadka xilligaas laga deyrinayay.
Tan iyo markii Mugabe uu noqday ra'iisul wasaarihii Zimbabawe, 1980-kii, ka dib doorashadii ay ilaalineysay Britain, maamulkiisa wuxuu lahaa mucaarad.
Ra'iisul wasaarihii hore oo sidoo kale muddo mucaarad ahaa Morgan Tsvangirai ayaa u dhintay kansar
Qoraal laga aqriyay telefishinka, Militariga wuxuu ku sheegay in si kooban ay awoodda ula wareegeen si ay u "baacsadaan dembiilayaal" ku hareereysan madaxweynaha, balse aysan Mugabe naftiisa dagaal kula jirin.
Mnangagwa iyo Mugabe ayuu khilaaf soo kala dhexgalay markii "uu uga shakiyay in xaaskiisa uu xilka dalka ku wareejin rabo", taas waxay sababtay inuu South Afrika aado Mnangagwe.
Dhageyso, Nin Soomaali ah oo ka hadlay sida uu u dhacay "inqilaabka milatari" ee Zimababwe
Milateriga Zimbabwe ayaa hadal uu ka baahiyay telefishinka dowladda ee dalkaasi ZBC waxa uu ku sheegay inuu beegsanayo wax uu ku tilmaamay "dembiilayaal ku xeeran madaxweyne Robert Mugabe".